Uncategorized – ASU Myanmar
LeaveaComment	/ Uncategorized / By Web Admin
ASU မှာ Scholarship လျှောက်လို့ရလား??? ASU မှာ မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက် In-State Tuition Fees (International Student Tuition Fees ရဲ့ ၄၀% ပဲပေးရမှာဖြစ်တယ်) နဲ့ တက်ခွင့်ရမယ့်အပြင် Scholarship အခွင့်အရေးများစွာရှိပါတယ်။ ASU ရဲ့ Website မှာလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ အောက်က Link မှာ ဝင်ကြည့်ရင် ASU မှာပေးတဲ့ Scholarship အမျိုးမျိုး‌အကြောင်း တွေ့ရပါမယ်။ Scholarships (angelo.edu) https://www.angelo.edu/…/paying-for-college/scholarships/ ဘာ Scholarship တွေရှိလဲ??? ASU မှာပေးတဲ့ Scholarship တွေကို အဓိက ၂ ပိုင်း ခွဲထားပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက ကျောင်းမတက်ခင်ကထဲက ကြိုတင်လျှောက်လို့ရတဲ့ Scholarship ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုက …
US မှာ‌ကျောင်းတက်ဖို့ စဉ်းစားနေသလား ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါ… အမေရိကန်နိုင်ငံက ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားတဲ့ တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုခုမှာ ကျောင်းတက်ဖို့က ငယ်ရွယ်သူလူငယ်များရဲ့ အိမ်မက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအိမ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ကတော့ သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။ ကျောင်းဝင်ခွင့်ရဖို့ခက်သလို ကုန်ကျစားရိတ်လည်းကြီးပါတယ်။ ကျောင်းလခတင်မကပါဘူး။ တက္ကသိုလ်တည်ရှိနေတဲ့ ပြည်နယ်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး နေစရိတ် စားစရိတ်ကလည်း ကွာပါတယ်။ Angelo State University (ASU) ကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်အဆင့်ရဲ့ ထိပ်ဆုံး ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာ ပါဝင်ပြီး နှစ် ၁၀၀ နီးပါးသက်တမ်းရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေမည့် မြန်မာပြည်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမည့် အထူးအခွင့်အရေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ၆ နိုင်ငံပဲ အကျုံးဝင်တဲ့ ASU ရဲ့ Global Preparation Program ရှိတာ​ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ …
US မှာ‌ကျောင်းတက်ဖို့ စဉ်းစားနေသလား ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါ… Read More »
အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်ပြည်နယ် ဆန်အန်ဂျယ်လိုမြို့မှတည်ရှိတဲ့ Angelo State University (ASU) ရဲ့ ထူးခြားချက်တွေထဲက အချို့ကို ဖော်ပြရမယ် ဆိုရင်တော့ 1. ASU ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်အဆင့် Top 14% ထဲမှာ နှစ်စဉ် ထည့်သွင်းဖော်ပြခံရတဲ့ ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ 2. 1928 ခုနှစ် တက္ကသိုလ်စတင်တည်ထောင်တဲ့ အချိန်ကနေ ယနေ့အထိ တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာ ယနေ့အထိ အမှုအခင်း တစ်စုံတစ်ရာမှမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ တက္ကသိုလ် ဖြစ်တယ်။ 3. တက္ကသိုလ်ရဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနေတဲ့ အဆောင်တွေဟာ တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးကျောင်းဆောင်တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတဲ့ အဆောင်တွေဖြစ်တယ်။ 4။ ASU Myanmar ကနေတဆင့်လျှောက်တဲ့ မြန်မာကျောင်းသားတွေ In-State Tuition Fees နဲ့ တက်ခွင့်ရမယ် (International Tuition …
အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်ပြည်နယ် ဆန်အန်ဂျယ်လိုမြို့မှတည်ရှိတဲ့ Angelo State University (ASU) ရဲ့ ထူးခြားချက်တွေထဲက အချို့ကို ဖော်ပြရမယ် ဆိုရင်တော့ Read More »
Angelo State University ရဲ့2022 Fall Semester Intake အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း Angelo State University ရဲ့ Fall Semester Intake အတွက် လျှောက်လွှာများ စတင် လက်ခံပေးနေပါပြီ။ သံရုံးကနေ Visa ရဖို့အတွက်က ခါတိုင်းထက် ပိုကြာတာမို့ အခုကတည်းက လျှောက်ထားမှ အတော်လောက် ကျပါမယ်။ ASU မှာယခုလက်ရှိကျောင်းသားကျောင်းသူ ၆ ယောက် တက်ရောက်နေပြီး နောက်ထပ် ၄ယောက် Spring Semester Intake မှာတက်ရောက်ဖို့ရှိပါတယ်. ဒါပေမယ့် Visa appointment အခက်အခဲကြောင့် online နဲ့ဘဲ ကျောင်းတက်ဖို့ ဖြစ်သွားပါတယ်.ဒါကြောင့် on campus တက်ရောက်ချင်သူများအတွက် အခုကတည်းက ကြိုတင်လျောက်ထားရင်အကောင်းဆုံးပါပဲ . ASU အကြောင်းသိချင်ရင်တော့ပေးထားတဲ့ …
Angelo State University ရဲ့2022 Fall Semester Intake အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း Read More »
အ​မေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်အဆင့် ၁၅ % ထဲမှာပါတဲ့ Angelo State University (ASU) မှာ ၁။ ဆယ်တန်းအောင် (သို့) အခြား High School Equivalent အောင်လက်မှတ်နဲ့ လျှောက်လို့ရပါတယ်။ English Score ကတော့ Online ကနေဖြေလို့ရတဲ့ IELTS (Indicator) နဲ့ Duolingo အမှတ်တွေနဲ့ လက်ခံပေးပါတယ်။ ၂။ မြန်မာပြည်က ကျောင်းသားတွေ ASU Myanmar (Envision/YBM-Korea) ကနေတစ်ဆင့်လျှောက်ရင် In-State Tuition Fees နဲ့ တက်ခွင့်ရပါမယ်။ (International Tuition Fees ထက် ၆၀% သက်သာပါတယ်)။ ကျောင်းပြီးသည်အထိ In-State Tuition Fees နဲ့ တက်ရမှာနော်။ ၃။ …
အ​မေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်အဆင့် ၁၅ % ထဲမှာပါတဲ့ Angelo State University (ASU) Read More »
Application Dead Line Extended to end of October! Apply Now
Application Dead Line Extended to end of October! Apply Now!!! လာမယ် Spring Semester (January intake) အတွက် နောက်ဆုံးလျှောက်ရမည့်ရက်ကို အောက်တိုဘာလ ၁၅ရက် (ဒီနေ့) သတ်မှတ်ထားပေမည့် မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ အခက်အခဲကို နားလည်ပေးပြီး ASU က နောက်ထပ် ၁၅ ရက် ထပ်တိုးပေးလိုက်ပါပြီ။ လျှောက်ချင်တဲ့သူတွေ ASU Myanmar ရုံးကို အမြန်ဆက်သွယ်လိုက်တော့နေယ်… ASU Global Preparation Program ကနေ In-State Tuition Fees နဲ့ တက်ခွင့်ရမည့် ကျောင်းသားတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေလည်း ပါတယ်ဆိုတာတော့ သိကြပြီး ဖြစ်မှာပါ။ ကျောင်းလခ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း …
Application Dead Line Extended to end of October! Apply Now Read More »
ASU ကနေ ဘွဲ့ရပြီးရင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်ဆက်လုပ်ခွင့်ရှိလား မေးလာသူများအတွက် ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် တစ်ခုခုမှာ ကျောင်းတက်ရင်းအလုပ်လုပ်လို့ရသလို ကျောင်းပြီးရင်လည်း အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားအများစု ကတော့ ဘွဲ့ရပြီးရင် Optional Practical Training လို့ခေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့ဆင်းခြင်း (OPT) ကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့အခွင့်အလမ်းရရှိပါတယ်။ Optional ဆိုတော့ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိတာပေါ့။ လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့ဆင်းခြင်း ဆိုတာဟာ F-1 visa နဲ့ ကျောင်းသားများတက်ခဲ့တဲ့ အဓိကလေ့လာမှုနယ်ပယ်နဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်မှာ လက်​တွေ့ဆင်းတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ Mechanical Engineering Major တက်ခဲ့ရင် Mechanical Engineering နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်ဝင်လုပ်တာမျိုးပေါ့။ …
ASU ကနေ ဘွဲ့ရပြီးရင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်ဆက်လုပ်ခွင့်ရှိလား မေးလာသူများအတွက် ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ Read More »
အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များစာရင်းတွင် ၁၃ နှစ်ဆက်တိုက် ASU ဖော်ပြခံရ… အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များစာရင်းမှာ Angelo State University ဟာ ၁၃ နှစ်ဆက်တိုက်ဖော်ပြခံရခဲ့ပါတယ်။ ဂုဏ်ပြုခံရမှုဟာ တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ၄ နှစ်တက်ရတဲ့ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေထဲက အကောင်းဆုံး ၁၄% ပဲရရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရဲ့ အစိုးရတက္ကသိုလ်များထဲက ဒီ ၂၀၂၂ စာရင်းဝင်မှာတဲ့ တက္ကသိုလ် ၆ ခုသာရှိပြီး အဲဒီထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်လို့ ASU ကိုယ်စား ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ This never gets old! For the 13th straight year, we’ve been listed as one of the “Best Colleges” in the …
အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များစာရင်းတွင် ၁၃ နှစ်ဆက်တိုက် ASU ဖော်ပြခံရ Read More »